Ukuthuthukiswa kolwazi nobuchwepheshe - yezindawo ezihamba phambili ekuthumeleni umsebenzi womuntu. Ngakho-ke, kulesi sifunda imali omningi imali. Kusukela ekuqaleni futhi eziningi imisebenzi ehlukene sekunqunyiwe ukuba kube manje, okuyinto sina intokomalo ezimpilweni zansuku zonke abantu abaningi. Nokho, ne ukuthuthuka kwezobuchwepheshe, izinkinga eziningi, enye yazo - isamba ngokweqile ukugcina lemininingwane. Yolwazi ayehloselwe ukuxazulula lesi simo.
Ekuhlaziyeni ngabaphathi semininingwane izinhlelo
Njengoba inkinga yokugcina esiningi ulwazi oluhambisana namuhla, zikhona izindlela eziningana ukuxazulula. Ngamunye wabo nekubukana nemsebenti indlela ethile. Nokho, ngokuhlangana akha eziyinkimbinkimbi ngokugcwele okuyinto lula inkinga USB.
Kukhona ngezigaba ocacile, ebheka isidingo database ethize kanye nokulandelwa DBMS (semininingwane management system). Okuvame kakhulu okwamanje kubhekwa isitoreji ubuchwepheshe amaklayenti-server. Lezi zihlanganisa lokhu okulandelayo: Firebird, Interbase, IBM DB2, MS SQL Server, Sybase, Oracle, PostgreSQL, Linter, MySQL. Sinesithakazelo inketho yokugcina - MySQL, okuyinto ithimba ngokuphelele endinganisweni SQL. Lobu buchwepheshe ingenye wendawo isicelo kanye ukukhiqizwa izinkinga ethandwa kakhulu futhi ngokuvamile amasha ezisetshenziswayo ukubhekana ne of abancane.
Client-iseva ubuchwepheshe kokumethemba ifayela-leseva database, okuyinto baye balahlekelwa izikhundla zabo ngenxa eziningi nemiphumela ethile engathandeki ezikhona, phakathi lapho isidingo ukwaba esiphelweni DBMS ikhenela kukhompuyutha ngayinye nomthwalo abalulekile kwi inethiwekhi yendawo, okuholela isikhathi esiningi anda. Leli qembu kuhlanganisa Microsoft Access, le Borland a Paradox.
Ubuchwepheshe obusha kuyanda
Nokho, eminyakeni embalwa edlule kuvele izinto zobuchwepheshe obuphambili ukuthi kuyanda futhi sikhulu kakhulu isidingo sokuxazulula izinkinga amancane wendawo. Sikhuluma mayelana esishunyekiwe ngabaphathi semininingwane izinhlelo. Isici esiyinhloko le database - akukho ohlangothini server. Uhlelo ngokwalo wezincwadi, ngokuvumela ngendlela iyunifomu ukusingatha esiningi ulwazi isingathwe kukhompyutha wendawo. Le ndlela iqeda nemibi kufayela iseva imithombo, futhi kuphakeme kakhulu ukuba amaklayenti-server isivinini ubuchwepheshe.
Njengoba izibonelo kungabonwa OpenEdge, SQLite, BerkeleyDB, omunye ongakhetha Firebird ka Amazombe Sav, Microsoft SQL Server le Compact, Linter, kanye omunye MySQL inketho ukuthi ithimba akahlukile nalezo ezazisetshenziselwa ukwenza amaklayenti-server egciniwe. Nokho, izinhlelo esishunyekiwe kalula ulahlekelwe ngokuhlathulula ukusebenza kwawo uma inkinga ngeke usaba khona lendawo.
Izinzuzo main of the database MySQL
ukuphathwa uhlelo MySQL semininingwane ingenye ubuchwepheshe ethandwa kakhulu, ngoba kungaba isebenze ukubhekana inani elikhulu imisebenzi. Uma siqhathanisa ke nozakwabo yesimanje, kungenzeka ukuhlonza eziningi eziwusizo ezinkulu.
Inzuzo enkulu emakethe Russian ubhekwa ukutholakala kwayo, ngoba kumahhala ezimweni eziningi. Isici sesibili iyona isivinini. Omunye izinhlelo ethandwa kakhulu kuyinto MySQL. Ithimba ke iyashesha, nge okungenani impendulo isikhathi. Ayikho nomthelela ijubane ukucutshungulwa imiyalo ukuxhuma kwiseva amaklayenti amaningi kwimodi multithreaded ngokusebenzisa InnoDB ukwesekwa ezosetshenziswa ukuthengiselana okusheshayo.
Ukuba khona umshayeli ODBC ivumela onjiniyela ukuthi lula isixazululo yezinkinga eziningi. Izinzuzo kufanele kubandakanye futhi ukuhlinzekwa kwamathuba temarekhodi obuphelele esinqunyiwe kanye variable. Kodwa umsebenzi oyinhloko okuyinto kakhulu ukuba khona phakathi program - esibonakalayo ngezilimi C no PHP. Maningi amathuba olunikezwa MySQL, abavunyelwe ukusebenzisa lolu hlelo database inqwaba nabahlinzeka ngemisebenzi wokusingatha iwebhu.
Futhi engumshumayeli elula, ukuthuthukisa isithakazelo ubuchwepheshe yesimanje ulwazi isitoreji, kubalulekile ukutadisha MySQL, imiyalo SQL nolwamagama ngoba ochwepheshe kule ndawo bayindlala kakhulu futhi ikhokhelwe kakhulu kuphi emhlabeni. Ngakho-ke, uma umuntu onesithakazelo kulesi isiqondiso ngaphandle kokulibala izindleko. Kufanele ukuhambisa ukufunda manje.
Yini ngidinga ukufunda
Uma uthi nhlá kungase kubonakale sengathi le ndawo kunzima ukuzithiba cwaningo futhi kudinga ukuxhumana njalo nodokotela onguchwepheshe. Nokho, akunjalo. Isifundo izakhiwo kanye izici MySQL, iqembu eyinhloko ulimi nombuzo futhi noma yini ehlangene nakho, ungakwazi ngumnikazi, ngaphandle asebenzise usizo consultant. Kuyinto ngokwanele ukuba banesifiso imizamo siqhubekele phambili. Kuphela self-ukuthuthukiswa kanye cwaningo kulendawo kuzovumela ukuthola ulwazi olusha, ukuhlanganisa le nemakhono labawatfolile futhi, mhlawumbe, qala yokwakha ama-career bese ukuhambisa kulesi siqondiso.
Ukuze ukufunda nemiyalo eyisisekelo, okokuqala, kudingeka nginazo inguqulo mahhala MySQL console Umbuso indawo. Lokho inqubo yokufunda iqala ke. Ungalanda it kusukela ezikhulwini zikahulumeni kuya MySQL indawo. It efakwe kalula kunoma iyiphi yesistimu yokusebenza, ukwakha iseva kanye iklayenti kwikhompyutha olulodwa, okuyinto ekahle kakhulu.
Khona-ke kubalulekile ukuba iphendukele yokuthola Lencwadi yokuqeqesha equkethe ulwazi oluyisisekelo mayelana MySQL imvelo. Console imiyalo ucwaningo eziyisisekelo, njengoba umthetho, bona nazo equkethwe. Ulwazi mayelana nale impela eningi. Nokho, udinga ukuza ukukhetha sina. Imininingwane bafanele banikelwe njalo futhi leyakheke ngokucacile.
Uma une ulwazi oluyisisekelo ngolimi lwesiNgisi, ungasebenzisa esakhelwe console ukwesekwa. Ngenxa yale njongo kukhona usizo umyalo ekhethekile, esiza ukuqonda ukusetshenziswa MySQL amathuluzi.
The main imiyalo console
A shintsho abutshelezi izici eziyisisekelo, amakhono kanye nezinzuzo, sifika kulo uhlu nemiyalo eyisisekelo. MySQL Umbuso ekuqaleni iqukethe umsebenzisi eyodwa kuphela, okuyinto nje esetshenziselwa isifundo. Lo msebenzisi okuthiwa impande, ogama iphasiwedi efanayo igama.
Lapho ukuqalisa lokuqala futhi okwalandela zekhonsoli MySQL Umsebenzisi uzodinga ukufaka iphasiwedi impande for umsebenzi okunye ne DBMS MySQL. CLI imiyalo zitholakala kuphela emva ukuqinisekiswa yimpumelelo.
Ngemva kokuhlolwa yimpumelelo ukuze kube lula, ungakwazi ukubonisa imiyalo ekhona ngokusebenzisa umyalo usizo. Ngemva kwalokho, console izokwethulwa yonke imiyalo ekhona kanye nencazelo emfushane wabo.
futhi imiyalo ukubonisa ukulawula
Manje udinga ukuya isinyathelo esilandelayo. Ukuze wenze lokhu, kufanele ukhethe i-ekhona noma yakha i-egciniwe entsha. Ukukhetha i database ekhona kumele sebenzisa umyalo ukusetshenziswa. Futhi ngokusebenzisa igebe faka igama egciniwe. Ekuqaleni, Umbuso indawo kukhona eyodwa kuphela - novivinyo igama. Ngakho-ke, umbuzo izobukeka kanje: ukusetshenziswa ukuhlolwa.
Ukuze ukudala database udinga ukusebenzisa ukudala umyalo, ekhomba wakhe semininingwane elisemqoka futhi ecacisa igama elifanele. Isakhiwo kuthatha ifomu elilandelayo: adale database Name_of_database. Ukuze sisebenze database okudalwe kubalulekile ukusebenzisa ngokusebenzisa umyalo ukusetshenziswa.
Lesi sangoma has a umsebenzi ukubonisa yolwazi ekhona, amatafula, okhiye eyinhloko noma uxhumano zangaphandle kanye outputting ulwazi olutholakala ngaye MySQL console. Amathimba e Kulokhu kufanele njalo siqale iziphakamiso ukukhombisa. Ngokwesibonelo, ukuze sibonise uhlu yolwazi etholakalayo umsebenzisi wamanje, vele ufake nombuzo ezilandelayo: show yolwazi. Ukuze sibonise etafuleni ngokwanele emva elisemqoka ukushintsha into isibonisi ngokubhala amatafula.
Ithimba Amathebula Management
Ngaphambi kokuqhubeka okwengeziwe, kubalulekile waphinda ukukhumbula ukuthi kuhambisana ejwayelekile SQL inikeza amathuba onjiniyela, kungakhathaliseki database nasezinhlelweni zokusebenza. Izicelo athuthukiswe kunoma iyiphi imvelo olusekela indinganiso SQL, izosebenza ngempumelelo (lapho database luyatholakala, futhi amathebula) e MySQL imvelo. Windows imiyalo console akahlukile nalezo ezazisetshenziselwa ukwenza amakha izinhelo zokusebenza.
Ze-spreadsheet kukhona imiyalo eminingi eqondile ukuthi, uma sihumusha ukuba isiNgisi, azikhulumele. On the Ukwakha umyalo eshiwo ngenhla. Ingase futhi isebenze ukuze ungeze amatafula database adalwe. Ukuze ususe semininingwane izinto ezifana amatafula kanye esetshenziswa iconsi umyalo, ukuba okuyinto yengezwe igama into singabhujiswa. Isibonelo: iconsi igama _ ka _ _ etafuleni lakho.
izicelo syntax kwiseva egciniwe njalo ngokohlaka jikelele. Ngakho-ke, isicelo, eklanyelwe ku-Windows, futhi sizosebenza kahle MySQL Linux console. Amathimba iphathwa kuseva ngaphandle iphutha yesistimu yokusebenza umuntu akakwazi kubangele amaphutha abanye.
Kodwa okubaluleke kakhulu-spreadsheet umyalo-syntax ilula ngokwanele, - khetha iqembu. Isetshenziselwa ukuze ukhethe idatha kusuka database. I-syntax yasekuqaleni simiswe ngalendlela lelandzelako: ukhethe * kusukela ithebula _ igama. Ngokuthumela isicelo kuseva egciniwe, iklayenti kumele uthole wonke amarekhodi agcinwe ethebuleni.
Abantu abaningi abayitholi neze ukukucabanga, kodwa uma upheqa izinsiza Inthanethi njalo wasebenzisa MySQL imiyalo. I PHP-imibuzo zisebenzisa i-syntax SQL ulimi ukubonisa okuqukethwe lwemibhalo ezitolo intanethi noma izindaba zokuxhumana nabantu. Esikhundleni "*" ngemva khetha izipesheli, njengoba umthetho, uhlu izinkambu eyinhloko etafuleni noma ematafuleni amaningana idatha alunge. Endabeni izibonelo zalokho lolutfolakala kumathebula amaningi, isixha ekhethekile ujoyine, esebenza ukuxhuma kubo phezu uxhumano sangaphandle esikhona. Nokho, kulesi simo kungashintshwa ngokuzimela olukhombisa ukuthi yiziphi izinkambu kufanele sigcwaliswe uxhumano.
Ukubeka imingcele amasampuli
Ngezinye izikhathi kukhona isimo lapho impendulo etholakele kusuka leseva database iqukethe idatha impinda. Ukuze umsebenzisi ibonakale okufakiwe esiyingqayizivele kuphela, usebenzisa sipho ahlukile. It ibekwe phambi uhlu Amasimu eceliwe futhi ukhonza njengomdala usizo ukufihla okuphindiwe.
A abaningi-kokuningi: Isibonelo Finyelela, e-SQL. Indlela yokwenza eziningi-to-?
Indlela ukufometha ye-USB flash drive nge umugqa wemiyalo nokuthi izindlela?
NHL: Ukwahlukanisa kanye nokusungulwa
Iwayini kukaStalin ozithandayo: izinganekwane ngokoqobo